ကွန်ပျူတာများအတွက်အသံကဒ်ကိုရွေးချယ်ဖို့ကိုဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
အချို့ကိစ္စများတွင်ပါကအများအပြားဓါတ်ပုံတွေကနေ JPEG,-file ကိုစုဝေးဖို့လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီနေ့ဒီ format နဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပေါင်းစည်းများအတွက်အများဆုံးအဆင်ပြေ options များကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။
အထူး tool ကိုသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုတည်းဖြတ် အသုံးပြု. : ကျနော်တို့ပြဿနာနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်စဉ်းစားပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုယင်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်။
Method ကို 1: တစ်ခုမှာထဲသို့အကွိမျမြားစှာ JPG ဖိုင်များကို Join
အဆိုပါ JPEG,-image ကိုအုပျစုထဲကနေတစ်ခုတည်းဖိုင်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်အလိုအလျောက်တတ်နိုင်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ Sobolsoft ထံမှတစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးအဆင့်မြင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်တရားဝင် site မှတစျခုသို့အကွိမျမြားစှာ JPG ဖိုင်များကို Join
ပြတင်းပေါက်၏လက်ဝဲဘက်မှာ program ကိုမှတ်ချက်စတင်ပြီးနောက်ဖိုင်တွေ button ကိုထည့်သွင်းဖို့ရှိပါတယ်ရသော။ တဦးတည်းအားဖြင့်ရုပ်ပုံများကိုတဦးတည်းကိုထည့်သွင်းရန်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "(s) ကို JPG File ကို Add"။ တစ်ဖိုင်တွဲကနေစာနယ်ဇင်းသူတို့ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ "Folder ကိုခုနှစ်မှာအားလုံး JPG File (s) Add".
ဒါက window ကိုဖွင့်လှစ် "Explorer ကို"။ သငျသညျပေါင်းစည်းချင်သောရုပ်ပုံများကိုပါဝင်သော directory ကိုကသွားလော့။ ပရိုဂရမ်ကို download လုပ်ပါမှအဓိကဖိုင်တွေရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောပေါင်းစပ်မီးမောင်းထိုးပြ ကို Ctrl + LMB နှင့်စာနယ်ဇင်း "ပွင့်လင်း".
အသုံးပြုသူကိုတားဆီးဘာထို program ၏သရုပ်ပြဗားရှင်းကိုသင်နေတဲ့အချိန်မှာနှစ်ခုသာဖိုင်တွေပေါင်းစပ်ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းသတိပြုပါ။ စာနယ်ဇင်းများ "အမှတ်" ဆက်လက်။
ပုံ၏အမိန့်နှစ်ခုလုံးကလက်မှတ်ရေးထိုးစာရင်း၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုပြောင်းလဲဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင် "Up ကိုရွှေ့" (ရှေးခယျြထားသောအနေအထားအထိ Picks) နှင့် "Down Move" (ရှေးခယျြထားသောအနေအထားကိုချလျော့နည်းစေတယ်လေ) ။
အဆိုပါ setting ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု "အမျှ Images ကိုဆက်သွယ်ပါ ... " သို့မဟုတ်လျှော့ချအဖြစ်ကျန်ရစ် - သင်ပေါင်းစပ်ပုံရိပ်တွေ၏အရွယ်အစား configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပိတ်ဆို့ "Output JPG အရည်အသွေး Option ကို" က output file ၏အရည်အသွေးတာဝန်ရှိသည်။ ကျနော်တို့အမည်ရှိသောက default တန်ဖိုးထွက်ခွာအကြံပြု "စမတ်-ထောက်လှမ်း".
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "ရုပ်ပုံဖွဲ့စည်းခြင်း" installation files များ၏ဒေါင်လိုက်သို့မဟုတ်အလျားလိုက်အမိန့်ကိုရွေးချယ်ပါ။
"ဒီ Folder ကိုရန်ရလဒ်ကယ်တင်သည်" ဒါဟာသင်ရရှိလာတဲ့ပုံရိပ်ကိုမှတပါးပစ်မှတ် directory ကိုတင်ထားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါပေါင်းစည်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ချိတ်တွဲ Start".
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုဗားရှင်းန့်အသတ်များအပြင်, မရှိခြင်းတစ်ခုမှာထဲသို့အကွိမျမြားစှာ JPG ဖိုင်များကို Join ရုရှားဘာသာစကား၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Method ကို 2: ဂရပ်ဖစ် Editor ကို
JPG-files တွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတခုဂရပ်ဖစ်အယ်ဒီတာသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနည်းလမ်းကိုအချိန်ပိုမိုစားသုံးဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်ကအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုအောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, သင်သည်မည်သည့်အယ်ဒီတာကိုသုံးနိုင်သည် - ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော် Paint ကိုအသုံးပြုဖို့ပါလိမ့်မယ်။ NET ။
Peynt.NET ကိုရှာဖွေမစတင်မီ "Explorer ကို" ဓါတ်ပုံများသင်တဦးတည်းထဲသို့ပေါင်းစပ်ချင်တယ်။ ပထမဦးဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ, mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "Properties ကို".
အဆိုပါ "Properties ကို" tab ကို "အသေးစိတ်"။ အဆိုပါလုပ်ကွက်မှ scroll "ပုံရိပ်"ပစ္စည်းကိုရှာဖွေရာမှာတော့ "အကျယ်" နှင့် "အမြင့်"။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်လိုအပ်ပါတယ်ကဲ့သို့ရှိညွှန်ပြအရေအတွက်ကအသံဖမ်း။
စုစုပေါင်းပုံရိပ်တွေ၏အသီးအသီးအဘို့အဆင့် 1 ကနေပြန်လုပ်ပါ။
program ကို run ခြင်းနှင့်မီနူးကို item ကိုသုံးပါ "ပုံရိပ်"selection ရသော "က Canvas size ကို ... ".
ပွင့်လင်း window size ကိုပတ္တူဆောက်လုပ်ထားပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲစေပါသည်။ သင်သည်အဘယ်သို့ဓာတ်ပုံများပေါင်းစပ်ချင်သလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်လာမယ့်ဖြစ်ပျက်။ ထဲမှာအလျားလိုက်အမျိုးအစား၏ထို option များအတွက် "အကျယ်" ဒေါင်လိုက်တစ်မူကွဲဘို့သင့်ကိုပေါင်းစပ်ချင်သမျှသောဓာတ်ပုံများများ၏ပေါင်းလဒ်အကျယ် - လယ်ပြင်၌အမြင့်၏ပေါင်းလဒ် "အမြင့်"။ လိုအပ်သောတန်ဖိုးများကို install လုပ်ပြီးနောက်စာနယ်ဇင်း "အိုကေ" အတည်ပြုပေးရန်။
ထို့နောက်ကို item ကိုသုံးပါ "Layers"selection ရသော "file ကိုမှတင်သွင်း ... ".
အဆိုပါ "Explorer ကို" လိုချင်သောပုံရိပ်တွေနှင့်အတူဖိုင်တွဲသွားလာ, ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးမီးမောင်းထိုးပြဖို့ကိုနှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံဟာကင်းဗတ်၏အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်တွင်နေရာချနေပါတယ်။ ခြေလှမ်း3ကနေလာမယ့်ထပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း add, အဲဒီနောက်ကင်းဗတ်ပေါ်မှာများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်အရပျ၌အပုံရိပ်အလွှာဆွဲယူရန်။ အောက်ပါဖိုင်တွေတစ်ခုချင်းစီအတွက်ဤအဆင့်များကိုပြန်လုပ်ပါ။
တိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေရန်, သင် menu ကပစ္စည်းများအတွက်လိုင်းများ၏ display ကိုဖွင့်နိုင်ပါသည် "View" - "အစိုးရသောမင်းတို့".
ရလဒ်အသုံးပြုမှု menu ကိုကယ်ဖို့ "File"selection ရသော "Save As ကို ... ".
အဆိုပါဖိုင်မန်နေဂျာပေးတဲ့ dialog box ထဲမှာ, သင်ဖန်တီး file ကို save ချင်ရှိရာ directory ကိုမှ navigate ။ ယင်းနောက်စာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး "File အမျိုးအစား"အဘယ်မှာရှိကို select လုပ်ပါ "JPEG,".
ထိုအခါပုံရဲ့အမည်, နှင့်စာနယ်ဇင်းကိုမေး "Save".
လိုအပ်သောလျှင်, စာနယ်ဇင်း, အ JPG-file ၏အရည်အသွေး adjust "အိုကေ".
တစ်ခု option ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပေါင်းစည်းအလွှာကိုအတည်ပြု "အားလုံးအလွှာပေါင်းမည်".
အယ်ဒီတာ Paint.NET ကို Adobe Photoshop ကိုနှင့် GIMP ထက်သင်ယူဖို့ပိုမိုလွယ်ကူပေမယ့်နေဆဲလူတယောက် Dexter လိုအပ်သည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Paint.NET သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
တက်ကဉျြးခြုပျ, ငါတို့နှစ်ခုဖိုင်န့်အသတ်အရင်းအမြစ်အဖြစ်ယခင်အသင်းအဖွဲ့သို့မဟုတ်လိုင်စင်အခကြေးငွေ၏ရလဒ်များကို အသုံးပြု. ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်ကတည်းကအသုံးပြုသူအများစုပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းကိုချဉ်းကပ်ကြလိမ့်မည်သတိပြုပါချင်တယ်။